Nagarik News - मनोनयनमा मनपरी नहोस्
महाधिवेशनबाट विजय र पराजयको टुंगो लागेसँगै नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू एक आपसमा सद्भाव साटासाट गर्न व्यस्त देखिन थालेका छन्। पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै एक सातासम्म शुभकामना ग्रहण गरेर बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बसिरहेका शेरबहादुर देउवालाई मंगलवार साँझ बोहोराटारस्थित निवासमा बोलाएर सभापतिका पराजित उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले शुभकामना दिए।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकालाई शुभकामना दिन निवर्तमान उपसभापति पौडेलले चियापान आयोजना गरेका थिए। कांग्रेसले राजनीतिमा चियापानलाई विशेष महत्व दिने गरेको छ। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर देश फर्किएपछि संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले सुरु गरेको चियापानलाई कांग्रेसले अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। यस्ता चियापानमा कांग्रेसका नेताहरू आपसमा हँसिलो अनुहारमा बातचित गर्छन्। मनोमालिन्य मेटाउने कोसिस गर्छन्। बोहोराटारमा भएको चियापानमा पनि सभापति देउवा र सभापतिमा पराजित भएका पौडेलले आत्मीयता प्रकट गरे। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गर्नेहरूले निर्वाचनमा हुने हार–जीतलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने सन्देश नेताहरूले दिए। निर्वाचनअघि आफूलाई अब्बल देखाउन एकअर्काविरुद्ध गरिएका हरेक प्रयासलाई बिर्सिएर नेताहरूले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन आगामी दिनमा पनि यस्तै खालको हार्दिकता प्रकट गर्न सके भने त्यो कांग्रेसका लागि निकै फलदायी हुनेछ।
सभापति निर्वाचित भइसकेपछि देउवाले आफूले गर्ने कामको कार्यसूचिको पहिलो बुँदामा नै आफूसँग पराजित भएका पौडेललाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने बताएका छन्। 'निर्वाचनमा पराजित भएका तथा क्षमता भएका साथीहरूलाई समेटेर अघि बढ्छु' भन्दै आएका देउवाका लागि पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापाजस्ता नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्न खासै गाह्रो पर्दैन। तर, कांग्रेसभित्रको असली राजनीति यही मनोनयन गर्ने प्रक्रियामै देखिने गरेको छ। १२ औँ महाधिवेशनपछि तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने बेलासम्ममा पनि केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन्। सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने २१ केन्द्रीय सदस्यमा भागबण्डा नमिलेकै कारण दिवंगत कोइरालाले अपूरो केन्द्रीय समितिमै पाँच वर्ष बिताएका थिए। पार्टीको गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि विधानमा व्यवस्था भएका ४१ वटा विभाग गठन नै हुन सकेनन्। गठन भएका विभागले पनि काम गर्न सकेनन्। सभापतिले मनोनयन गर्ने एक महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि पनि निकै 'लफडा' भएको थियो। विगतको अनुभवका आधारमा कांग्रेसभित्र यो मनोनयन प्रक्रियाले अहिले पनि सभापतिको टाउको दुखाउने देखिन्छ।
सबैलाई मिलाएर अघि बढ्छु, कसैलाई काखापाखा गर्दिनँ, विधानअनुसार चल्छु भनेर देउवाले गरेको प्रतिबद्धता लागू हुन सकेन भने उनी पनि सुरुदेखि नै आलोचित हुनेछन्। उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री मनोनयन गर्ने काम देउवाका लागि पनि त्यति सहज छैन। निरन्तर उनको पछि लागेका र निर्वाचन रणनीतिअन्तर्गत उनीसँग जोडिन आइपुगेका सहकर्मीलाई उनले कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसैका आधारमा उनको यात्रा सहज या कठिन के हुन्छ? त्यसको निर्क्याेल हुनेछ। पदाधिकारी मनोनयनमा सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न सके भने मात्र देउवाले केन्द्रीय समिति र विभाग गठनमा पनि सजिलो महसुस गर्न सक्छन्। अन्यथा, पदाधिकारी मनोनयनमा चिढिएकाहरूले अन्य प्रक्रियालाई पनि निरन्तर बिथोल्ने क्रम सुरु हुनसक्छ। देउवाले गर्ने सुरुका निर्णयमा निकै सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। पदाधिकारी मनोनयनमा सन्तुलन मिलाउन सकेनन् भने उनले पार्टीलाई विधानसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्नसक्ने छैनन्। उनलाई पार्टीमा निर्णय लिन सहज बहुमत त पुगेको छ तर महामन्त्री र कोषाध्यक्ष उनीभन्दा भिन्न समूहबाट जितेर आएका छन्। अर्को समूहबाट जित्नेहरू ४१ प्रतिशतको हाराहारीमा छन्। त्यसैले प्रतिशतको आधारमा भागबण्डा गर्ने क्रम बन्द गरे पनि दुवै पक्षकालाई मान्य हुने नेताको छनोट त्यति सजिलो छैन। यस्तो अवस्थामा क्षमता र पार्टीमा सक्रियताको आधारमा जिम्मेवारी दिने अवस्था बन्यो भने मात्र देउवा पार्टीमा सबैको सभापतिका रूपमा काम गर्नसक्ने छन्। कांग्रेस मतदाताले भारी मत दिएका खुमबहादुर खड्का र महामन्त्री डा. शशांक कोइराला पार्टीले महाधिवेशनबाट पारित गरेको 'संविधान कार्यान्वयनको वैचारिक नेतृत्व' लिने नीतिको विपक्षमा देखिएका छन्। महामन्त्री र धेरै मत पाएका निकट सहयोगी नै पार्टीको नीतिविरुद्ध रहेकाले सभापति देउवालाई पार्टी सञ्चालन गर्न त्यति सहज छैन भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ। उनले परिवर्तनको विपक्षमा बोल्नेहरूको मुख बन्द गराउन सकेनन् र उनीहरूलाई नै दायाँबायाँ राखेर निर्णय गर्न थाले भने कांग्रेस कुहिराको काग बन्न बेर छैन। त्यतिबेला सभापति देउवाले अहिले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको कुनै अर्थ र महत्व बाँकी रहने छैनन्।